Wasiirka Warfaafinta: Shabeelle Labo Jeer Ayaa Loo Sheegay Iney Ka Guuraan Dhismaha Dowladda Weyna Diideen * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta C/laahi Ciilmooge Xirsi ayaa ka hadlay tilaabadii shalay booliska Soomaaliya ku xiray radi Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta C/laahi Ciilmooge Xirsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in idaacadda Shabelle ay bilihii lasoo dhaafay 2 mar u geeyeen warqado digniin ah oo loogu sheegayo iney ka guurto dhismaha dowladdu leedahay, haseyeeshee ay iska dhago tirtay.
Wasiir Ciilmooge ayaa sheegay in sidoo kale, maamulka idaacadda Shabelle uu diiday in ay Idaacadda usoo diiwaan geliyaan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, markaasna dowladda go’aansatay in laga saaro guriga dowladda.
“Wasaaradu waxey ka codsatay Shabeelle bishii 7-aad iney iska diiwaangeliso wasaarada warfaafinta weyna diideen, kadib waxaan ka codsanay iney ka baxaan oo banneeyaan guriga Somali Airlines weyna diideen’’ ayuu yiri wasiirka Warfaafinta Boostada Isgaarsiinta iyo gaadiidka C/laahi Ciilmooge Xirsi.
Wasiirka ayaa beeniyey warar ay sheegeen maamulka Shabeelle oo ahaa in lagu yareeyey muddada dowladdu ku amartay iney uga guuraan dhismaha Somali Airline ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan rabaa inaan caddeeyo iney tahay shabakad wasaarad ahaan aan ka codsanay laba Jeer bilihii la soo dhaafay ee 8-aad iyo 9-aad, qoraalna ugu geynay iney ka baxaan oo banneeyaan guriga dowlada” ayuu sidoo kale yiri wasiir Ciilmooge.
Wuxuu sheegay wasiirku in ay dhawaan baneeyeen ilaa 5 guri oo kale oo ay lahyd dawladda Soomaaliya, kuwaasoo uu xusay in loo deganaa si sharci darro ah.
Wasiirka warfaafinata ayaa tilmaamay inuu soo afjarmay dagaalkii sokeeye, dalkuna yeeshay dowlad rasmi ah ayna tahay in wasaarad kasta howlaheeda qabsato.
“Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa’ideysto iney dadku fahmaan inuu soo afjarmay dagaalkii sokeeye in dowladu noqotay dowlad aan KMG aheyn oo taam ah, howlaheedii iyo mas’uuliyadeedii la soo noqotay, wax badanbaad iga maqasheen isbedelka dadku ha ogolaado’’ ayuu yiri Cabdulaahi Ciilmooge.
Radio Shabeelle ayaa maalintii labaad hawada ka maqan kadib markii shalay si xoog ah ay ku xireen booliska Soomaaliya oo fulinayey amar kazoo baxa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka.